Avia 57 for FSX
Su'aal Avia 57 for FSX
sano 2 2 bilood ka hor #231 by Dariussssss
Short oo fudud.
Waxaan jeclaan lahaa in ay arkaan diyaarad Avia 57 ee FSX. Waxaan jeclaan diyaarad in aad u badan.
Waxaa halkan FS2004 diyaarad la mid ah, laakiin kuma FSX. Sidaas daraaddeed, fadlan.
Thanks ka hor.
sano 2 2 bilood ka hor #236 by Gh0stRider203
Waxaa jira hal
sano 2 2 bilood ka hor #240 by Dariussssss
sano 2 2 bilood ka hor #241 by Gh0stRider203
Waxaad soo duuduubo. i qaaday dhowr ah. HELAY video ah la link a in description laakiin link in ku guuldareystay inuu noqon baddasheen SO aan ku sameeyey qaar ka mid ah oo dheeraad ah ka qodaya
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.371